६ वर्षका बालकको कमाई १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी « Khasokhas Follow @khasokhasmag
मंसिर २७ काठमाडौँ । एउटा ६ वर्षीय बालकले कति आम्दानी गर्छ ? तपाईं भन्नुहोला यस्तो सानो उमेर बच्चा काम गर्छ र ?
तर, रायन हरेक हप्ता युट्युवमा खेलौनाको समीक्षा गर्छन् र यसको बदला उनले राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन् ।
रायनले अघिल्लो वर्ष ११ मिलियन अमेरिकी डलर कमाई गरेका थिए । जुन नेपाली रुपैयाँमा १ अर्बभन्दा बढी हुन आउँछ ।
हालै वासिङ्टन पोष्टमा रायनको आमाले दिएको अन्तर्वार्तामा उनले भनेकी छिन्, ‘युट्युव च्यानलको सोच उनी तीन वर्षको उमेर हुँदा नै आएको थियो । रायन सानो उमेरदेखि नै खेलौनाको समीक्षा गर्ने टिभी च्यानलहरु खुब हेर्थे ।’